Nodimandry androany maraina i Zaratody, na nanao izay ho afany aza ny mpitsabo. Androany tolakandro no niala teny amin’ny HOMI ny nofo mangatsiakany.
Ben’ny tanàna amperin’asa ao Belalona izy. Voafidy tamin’ny anaran’ny Tiako i Madagasikara tamin’ny taom-piasana voalohany, lisitra tsy miankina indray no nahavoafidy azy tamin’ny 2015, ary mamarana ny taom-piasana faharoa izy izao maty nisy namono izao.
Lehilahy iray ahiahiana ho iray tamin’ireo nandray anjara tamin’ity fanafihana mitam-basy tao Befandriana Avaratra ity, no nosamborin’ny Zandary androany maraina ary atao famotorana amin’izao fotoana izao.